दसैंमा कस्तो मेकअप गर्ने ?
विराटनगर, २३ असोज । हिन्दू धर्मावलम्बीहरुको महान् चाड दसैँ नेपालीहरुले अहिले निकै हर्ष उल्लासका साथ मनाइरहेका छन् । दसैँ आफन्तसँगको मेलमिलापको पर्व तथा राम्रो लगाएर मीठो मसिनो खाएर घुम्नको पर्व पनि हो ।
विशेष गरी दसैँको मुख्य दिन भनेको टीका हो । दसैंको दसौँ दिन अर्थात् टीकाको दिन सबैलाई राम्रो लुगा तथा राम्रो श्रृंगार गरेर राम्रो देखिन मन लाग्छ । तर, राम्रो कसरी देखिने त ? यस प्रश्नले सबैलाई निकै चिन्तित बनाएको हुन्छ । मेकअपको सामान्य ज्ञान राखेर यो पालीको दशैंमा आफ्नो लुगामा आकर्षक देख्न सकिन्छ ।
दसैंको दिन मेकअप गर्दा दिनभरि टिकाउ हुने गरी मेकअप गर्यो भने आकर्षक देखिन सकिन्छ । मेकअप गर्दा विवाहित महिलाले रातो तथा ब्राइट रंगको पहिरनमा हल्का सिम्पल मेकअप गर्ने गर्दा निकै आकर्षक देखिन्छ । अविवाहितले भने सिम्पल र नेचुरल मेकअप गर्दा धेरै राम्रो देखिन्छ । अहिलेको गर्मी मौसम, बातावरण प्रदूषणका कारण हेभी मेकअपले आफूलाई भद्दा देखाएर मात्र होइन हेर्नेलाई समेत गार्हो हुने गर्छ ।
गर्मीको मौसममा वाटरप्रुफ मेकअप गर्नु पर्छ । साथै दशैको समयमा विवाहित महिलाहरूले रातो एवम् ब्राइट कलरका पहिरन तथा लामो कपालमा मेसि बनले सेमी ब्राइडल लुक्स दिने मेकअप उपयुक्त हुने गर्छ । रातो टीकाले यसै राम्रो देखाइरहेको बेलामा अझ रातो लिपिस्टिकले अनुहार निकै राम्रो खुल्छ । दसैँमा दिनभर टिकाउ हुनपर्ने भएकोले म्याट लिपिस्टिक उपयुक्त हुन्छ । अहिले निकै चलेको पहिरनमा कुर्ता, गाउन, लेहेंगा वा वानपिस छ भने मरुन कलर, गुलाबी तथा ब्राइट कलरको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
गर्मी तथा प्रदूषणले कपालाई ड्यामेज गर्ने हुँदा हेयर स्टाइलमा मेसी बन बनाएकै उपयुक्त हुन्छ । कपाल लामो छ भने कर्ल तथा छोटो छ भने स्ट्रेट गर्दा हुन्छ । मेकअपको साथ साथै लगाउने कपडा अनि हेयरलाई पनि ध्यानमा राखेर तयारी गरेमा दिनभरिसम्ममा पनि भद्दा देखिँदैन र आकर्षक देख्न सकिन्छ । विराटनगरस्तिथ इन्टरनेसनल ट्रेनिंग सेन्टरकी बिउटिसियन सीता घिमिरेका अनुसार मेकअप गरेको अनुहारमा सुत्नु अगाडि राम्ररी मेकअप रिमुभ गरेर मुख धोएर सुत्ने बानी बसाल्नु पर्छ । यसो नगरेमा स्किन ड्यामेज हुनुका साथै स्किनमा अन्य समस्यासमेत आउन सक्ने हुँदा सतर्कता अपनाउनु पर्छ ।